ဒါဟာ EA ၏အန်စာတုံးဆွီဒင်စတူဒီယို၏အကြောင်းကိုလေးဆယ်န်ထမ်းများ၏ထွက်ခွာအစီရင်ခံနေသည် - သတင်း - 2019
ဖြစ်ရပ်မှန် Star Wars စစ်မြေပြင်က II ကိုဖွင့်ဖို့ပျက်ကွက်စွပ်စွဲထားသည်။
Electronic Arts တို့ကပိုင်ဆိုင်ဆွီဒင်စတူဒီယိုအန်စာတုံး, သို့သော်အချို့အစီရင်ခံစာများအရသိရသည်ဒီနံပါတ်ကိုအမှန်တကယ်ထက်ပင်နိမ့်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်န်ထမ်းများ၏ 10% ကိုဆုံးရှုံး, ဒါမှမဟုတ် 400. ထဲက 40 ခန့်ကလူသိရသည်။
အန်စာတုံးရဲ့ developer များထွက်ခွာဘို့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ကို၏ပထမဦးဆုံး - အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်။ စတော့ဟုမ်း၌, အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာအဘို့, အကိုင်းအခက်နှင့်ဘုရင် Paradox Interactive မှရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မကြာသေးမီကဆွီဒင်နှင့်က Epic Games နဲ့ Ubisoft အတွက်ရုံးများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာအန်စာတုံး၏ယခင်န်ထမ်းအများစုရုံသည်ဤလေးမျိုးကုမ္ပဏီများမှသှားသောအစီရင်ခံသည်။
Star Wars စစ်မြေပြင်က II ကို - ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ဒီဇိုင်းစတူဒီယို (Battlefield V ကိုလာမည့်သည်အထိ) ကိုယခုအချိန်တွင်နောက်ဆုံးအများ၏စိတ်ပျက်မိကြောင်း 'ဟုဆိုအပ်၏။ ဂိမ်းမှထွက်ရန်အဆိုအရကြောင့် microtransactions မှဝေဖန်မှုများတစ်မုန်တိုင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်များနှင့် Electronic Arts တို့ developer များအရေးတကြီးထားပြီးဖြန့်ချိထုတ်ကုန်ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ရန်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ ဖြစ်ကောင်း developer များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးပျက်ကွက်အဖြစ်ကို ယူ. တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတည်နေရာမှာမိမိလက်ကိုကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
အန်စာတုံးနှင့် EA ၏ကိုယ်စားလှယ်များဤအချက်အလက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ခဲ့ပါဘူး။
ဗီဒီယို Watch: STAR WARS: Episode IX - Teaser Trailer Concept 2019 "Destiny" Daisy Ridley, Adam Driver Movie (နိုဝင်ဘာလ 2019).